ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈအကွောငျး ဆှေးနှေးပှဲ ဟားခါးမွို့ ပွညျနယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဌာတှငျ ပွုလုပျ - Chin World
Home Chin ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈအကွောငျး ဆှေးနှေးပှဲ ဟားခါးမွို့ ပွညျနယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဌာတှငျ ပွုလုပျ
တဈကမ်ဘာလုံးတှငျ ပွနျနှံ့လကျြရှိသော COVID 19 ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈအကွောငျး အသိပညာပေး ဆှေးနှေးပှဲကို ဟားခါးမွို့ ပွညျနယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဌာတှငျ ပွုလုပျခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးနှငျ့ကုသရေးဦးစီးမှူး ဒေါကျတာအောငျငှစေံမှ “ဒီနလေု့ပျတဲ့ပှဲက COVID19 ကမ်ဘာပွနျ့ ကပျရောဂါနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ လောလောဆယျ အနထေားမှာ မွနျမာနိုငျငံထဲကို တကျနိုငျသမြှ ဝငျမလာစဖေို့ ရောကျလာခဲ့ရငျလညျး စောစောစီးစီး သိရှိပွီး ထိထိရောကျရောကျကာကှယျနိုငျဖို့ ပွနျ့ပှားမှုတှအေတကျနိငျဆုံး မဖွဈစဖေို့ ရောဂါဖွဈပှားမှု လြော့ကစြဖေို့ရညျရှယျတာ ဖွဈပါတယျ” ဟုပွောသညျ။
ကနျြးမာရေးဌာနတှပေဲ လုပျရမှာ မဟုတျပဲ ပွညျသူလူထု အလှာစုံအားလုံး မှ လိုကျနာဆောငျရှကျမှ ရလဒျကောငျးတှရေမှာဖွဈကွောငျး၊ခငျြးပွညျနယျမှာ ရှိတဲ့ ပွညျသူပွညျသားတှအေားလုံး တဈယောကျခငျြး တဈယောကျခငျြးက အသိစိတျရှိရှိ လိုကျနာဖို့လိုအပျကွောငျးနှငျ့ ဆငျ့ကဲပွနျ့ပှား အသိပညာပေးဖို့လိုအပျကွောငျး လညျးပွောကွားခဲ့သညျ။
ဒေါကျတာအောငျငှစေံမှ ဆကျပွီး “ကြှနျတျောတို့ ဆောငျရှကျနတောဟာ ကိုယျ့နိုငျငံအမြိုးသားရေးသာ မကပဲနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့ခြီပွီးဖွဈနတောဟာ သတိကွီးကွီးနဲ့ ရငျဆိုငျကွရမယျ့ ဖွရှေငျးကွရမယျ့ အနထေားဖွဈသညျ့အတှကျ အားလုံးသညျပေါ့ပေါ့ဆဆ မနစေခေငျြဘူး၊ ဒါကွောငျ့ ပွညျသူလူထု ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှလညျး လူထုဆီသို့ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျမြား ၊သိသငျ့ သိထိုကျသော အကွောငျးအရာမြားကို အခြိနျနှငျ့ တဈပွေးညီ ပွောပွ ရှငျးပွလကျြရျှိပါတယျ” ဟုပွောသညျ။
COVID 19 သညျ ရောဂါပိုးမှား အသဈဖွဈပွီး အသဈဖွဈသညျ့အတှကျ ရောဂါပိုးမှား၏ မူလအခွတေညျတဲ့နရော ကူးစကျပွနျ့နှံ့ပုံ ၊ရောဂါပွနျ့နှံ့နိုငျစှမျး တုံ့ပွနျမယျ့အခွအေနကေို တဈကမ်ဘာလုံးက လလေ့ာနဆေဲ ဆနျးစဈနဆေဲ ကာလဖွဈသညျဟုလညျးသိရသညျ။
ဆှေးနှေးပှဲ တကျရောကျသူ ဒေါကျတာ ကြုံးပီးမှ “ အရမျးကောငျးတယျ ပွညျသူနှငျ့ ကနျြးမာရေးဌာနလကျတှဲပွီး အခုဖွဈနတေဲ့ရောဂါကို အတူတူကာကှယျဖို့ လမျးစဖှငျ့ပေးတဲ့အရာဘဲ W.H.O က pandemic လို့ပွောပွီးနောကျဘယျလိုကာကှယျရမယျ ဆိုတဲ့အခကျြလေးခကျြကို ပွညျသူတိုငျးကိုယျတတျနိုငျသလောကျလိုကျနာ ရမှာဘဲ 1.Prepare and be ready2.Detect, protect and treat3. Reduce transmission4. Innovate and learn ဒီအခကျြတှထေဲမှာ ပွညျသူတှအေလုပျနိုငျဆုံးက နံပါတျ၃ ဘဲ လကျကိုဆေးပါ ခဏခဏဆေးပါရေ ဆပျပွာနှငျ့ဆေးပါ Alcohol ပါတဲ့ လကျဆေးရညျတှနှေငျ့ဆေးပါ ကိုငျမိတိုငျးလကျဆေးပါ” ဟုပွောသညျ။
ယခုဆှေးနှေးပှဲကို ယနညေ့နပေိုငျး ၆နာရီ ဝနျးကငျြခနျ့တှငျ ပွုလုပျခဲ့ ပွီး ဌာနဆိုငျရာမြား အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြား တကျရောကျဆှေးခဲ့ကွောငျးလညျးသိရသညျ။
တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့မှ စတငျဖွဈပှားသော အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါ COVID 19 ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈသညျ တဈကမ်ဘာလုံးတှငျ ပွနျ့နှံလကျြရှိပွီး ယနထေိ့ တဈကမ်ဘာလုံးတှငျ အတညျပွုလူနာ ၁၂၅၀၄၈ဦးရှိပွီး သဆေုံးသူ ၄၆၁၃ ဦး ရှိုပွီဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ ဟားခါးမြို့ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာတွင် ပြုလုပ်
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ပြန်နှံ့လျက်ရှိသော COVID 19 ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဟားခါးမြို့ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးမှူး ဒေါက်တာအောင်ငွေစံမှ “ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲက COVID19 ကမ္ဘာပြန့် ကပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ လောလောဆယ် အနေထားမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တက်နိုင်သမျှ ဝင်မလာစေဖို့ ရောက်လာခဲ့ရင်လည်း စောစောစီးစီး သိရှိပြီး ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပြန့်ပွားမှုတွေအတက်နိင်ဆုံး မဖြစ်စေဖို့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျော့ကျစေဖို့ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ကျန်းမာရေးဌာနတွေပဲ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပဲ ပြည်သူလူထု အလွှာစုံအားလုံး မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှ ရလဒ်ကောင်းတွေရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ချင်းပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံး တစ်ယောက်ချင်း တစ်ယောက်ချင်းက အသိစိတ်ရှိရှိ လိုက်နာဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဆင့်ကဲပြန့်ပွား အသိပညာပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း လည်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာအောင်ငွေစံမှ ဆက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်နေတာဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအမျိုးသားရေးသာ မကပဲနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ချီပြီးဖြစ်နေတာဟာ သတိကြီးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် ဖြေရှင်းကြရမယ့် အနေထားဖြစ်သည့်အတွက် အားလုံးသည်ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေစေချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှလည်း လူထုဆီသို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ ၊သိသင့် သိထိုက်သော အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြောပြ ရှင်းပြလျက်ရှိ်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
COVID 19 သည် ရောဂါပိုးမွှား အသစ်ဖြစ်ပြီး အသစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ရောဂါပိုးမွှား၏ မူလအခြေတည်တဲ့နေရာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့ပုံ ၊ရောဂါပြန့်နှံ့နိုင်စွမ်း တုံ့ပြန်မယ့်အခြေအနေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လေ့လာနေဆဲ ဆန်းစစ်နေဆဲ ကာလဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သူ ဒေါက်တာ ကျုံးပီးမှ “ အရမ်းကောင်းတယ် ပြည်သူနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနလက်တွဲပြီး အခုဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကို အတူတူကာကွယ်ဖို့ လမ်းစဖွင့်ပေးတဲ့အရာဘဲ W.H.O က pandemic လို့ပြောပြီးနောက်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ် ဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ကို ပြည်သူတိုင်းကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လိုက်နာ ရမှာဘဲ 1.Prepare and be ready2.Detect, protect and treat3. Reduce transmission4. Innovate and learn ဒီအချက်တွေထဲမှာ ပြည်သူတွေအလုပ်နိုင်ဆုံးက နံပါတ်၃ ဘဲ လက်ကိုဆေးပါ ခဏခဏဆေးပါရေ ဆပ်ပြာနှင့်ဆေးပါ Alcohol ပါတဲ့ လက်ဆေးရည်တွေနှင့်ဆေးပါ ကိုင်မိတိုင်းလက်ဆေးပါ” ဟုပြောသည်။
ယခုဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ညနေပိုင်း ၆နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ဌာနဆိုင်ရာများ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ဆွေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့မှ စတင်ဖြစ်ပွားသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ COVID 19 ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ပြန့်နှံလျက်ရှိပြီး ယနေ့ထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အတည်ပြုလူနာ ၁၂၅၀၄၈ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၄၆၁၃ ဦး ရှိုပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Previous post ပလကျဝမွို့နယျတှငျ လကွေောငျးဖွငျ့ပဈခတျမှုကွောငျ့ လူရှဈဦးသဆေုံး ခွောကျဦးဒဏျရာရ
Next post အမရေိကရောကျ ခငျြးလူမြိုးမြား ကိုရိုနာဗိုငျးရပျစပျကွောငျ့ အှနျလိုငျးဖွငျ့ ဝတျပွုတော့မညျ